Mihazakazaha dictate ao amin'ny OS X amin'ny alàlan'ny baiko amin'ny feo | Avy amin'ny mac aho
Efa ela ianao no nampiasa ny rafitra paoma manaikitra OS X ary nanapa-kevitra ny hianatra fomba sy fiasa vaovao. Na dia mbola tsy tonga teto amin'ity rafitra ity aza i Siri dia misy mpanampy amin'ny dictation afaka miteny ary ny rafitra dia mamadika ny feonao mivantana ho lasa lahatsoratra.
Na izany aza, ankoatry ny tsy maintsy ampiendrehana azy amin'ny voalohany dia tsy atao intuitively io fiasa io ary mila manindry ny lakile indroa misesy. fn. Amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny fomba famoronana baiko am-peo isika hampavitrika ny dictation nefa tsy mila manindry na inona na inona amin'ny fitendry.
Fantatrao ve fa azo atao ny mivavaka amin'ny alàlan'ny feonao fotsiny? Mba hahafahanao manamboatra tsara ny rafitra OS X anao hanao izany dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Manokatra izahay Taratasy rafitra ary miditra ny fizarana an'ny Didy sy fitenenana.
Ao amin'ny Dictation sy ny kabary dia manamarika ny safidy "Activated" izahay ary manamarina fa nanondro ny "Use dictation namboarina" avy eo aorian'izay dia manomboka misintona avy amin'ny Internet izay ilaina amin'ity fampiasana ity izahay.
Misokatra izahay izao Safidin'ny rafitra> Azo idirana> Dictation ary manisy marika ny boaty «Ampandehanana ny teny fandefasana ny didy».
Ity ambany ity misy boaty iray ahafahantsika manoratra teny tokony hataontsika lazao alohan'ny hitenenana ny baiko hoe "Start dictation" na "Stop dictation". Ny teny izay namboarina ho lasa default dia ny solosaina, avy eo dia tsy maintsy miteny "Solosaina" aloha isika ary avy eo "Manomboha didy".
Raha te-hahita izay baiko azonao ampiasaina ianao dia tokony hidina amin'ny bao menio ambony an'ny Finder izay hisehoany sary kely mikrô ary amin'ny fipihana eo dia afaka mahita ireo baiko efa misy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X El Capitan » Mampihatra didim-pitondrana ao amin'ny OS X amin'ny alàlan'ny baiko am-peo